Kedu ihe bụ Google Drive | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Dropbox, n'ezie ị maara na m na-ekwu maka ya ọrụ nchekwa igwe ojii. Dropbox bụ otu n'ime ọrụ nchekwa igwe ojii mbụ ghọrọ ihe ama ama, ọ bụghị naanị n'etiti ndị ọrụ, kamakwa n'etiti ụlọ ọrụ, n'ihi ntụgharị nke ọ na-enye anyị iji nweta data anyị niile echekwara na igwe ojii ma dị site na ngwaọrụ ọ bụla.
Mana ka ọtụtụ afọ gafere, Dropbox nọ na-adaba na enweghị nsogbu, ọkachasị n'ihi mwepụta nke igwe ojii nchekwa ọhụrụ nyiwe site na nnukwu egwuregwu na ụlọ ọrụ ahụ. Google, Microsoft, Apple, Mega bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị na-enye anyị ụdị ọrụ a, ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere otu ọnụahịa. Ma, Gini bu Google Drive?
1 Kedu ihe bụ Google Drive
2 Gini bu Google Drive?
3 Etu esi eji Google Drive
3.1 Jiri Google Drive na kọmputa gị
3.2 Jiri Google Drive site na ekwentị gị
4 Njirimara Google Drive
5 Etu esi ebudata Google Drive
6 Ego ole ka Google Drive na-efu
Google Drive hụrụ ọkụ ahụ na nke mbụ ya na 2012 ma kemgbe ahụ ohere nchekwa ọ na-enye na ọnụọgụ ọrụ na-eto n'ike n'ike ka ọ bụrụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma dị taa na ahịa, ọ bụrụhaala na ị bụkwa ndị ọrụ nke ọrụ email Gmail, ebe ọ bụ na ọrụ abụọ ahụ ejikọtara, naanị dị ka Foto Google.
Google Drive, dị ka aha ahụ na-egosi, bụ ọrụ igwe ojii nke Google. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ Gmail, Google na-eme ka anyị nwee ohere 15 GB nke ohere n'efu site na Google Drive, yabụ na anyị ekwesịghị ịdebanye maka ọrụ a ma ọ bụrụ na anyị nwere akaụntụ Gmail Google Drive dị maka nyiwe niile dị na ahịa, ma maka desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, ya mere ịnweta data anyị na igwe ojii agaghị enwe nsogbu n'oge ọ bụla.
Gini bu Google Drive?
Goole Drive, dị ka ọtụtụ ọrụ nchekwa igwe ojii, na-enye anyị ohere iburu anyị mgbe niile, kama na ama anyị, akwụkwọ niile anyị nwere ike ịnwe kwesịrị ịkpọ ma ọ bụ dezie n'oge ụfọdụọ bụrụhaala na anyị ga-ezute n'ọfịs. Na mgbakwunye, Google Drive na-eme ka anyị nwee ngwa dị iche iche iji mepụta akwụkwọ ederede, akwụkwọ ntanetị na ihe ngosi, ọ bụ ezie na usoro ọ na-eji adabaghị na ngwa ndị ọzọ dịka Microsoft's Office na iWork nke Microsoft, yabụ na ọ bụghị mgbe niile Ọ dị mma echiche iji ụdị ngwa a iji mepụta akwụkwọ nke anyị ga-ahazi nke ọma tupu anyị ewepụta ha.
Ọzọ uru na Google Drive na-enye anyị, anyị na-ahụ ya na arụ ọrụ, ọ na-enye ohere ka ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'otu akwụkwọ ọnụ, atụmatụ dị mma maka ndị ọrụ na-arụkarị ọrụ ma na-arụ ọrụ n'ọfịs.
Etu esi eji Google Drive
Ọ bụrụ na anyị nwere akaụntụ Gmail, anyị nwere n'aka anyị, kpamkpam na-akwụghị ụgwọ, 15 GB nke ohere nchekwa na Google Drive, oghere na-ekerịta na Google Photos na nke ahụ dịkwa n'efu maka ndị ọrụ Gmail niile. Iji nweta ọrụ nchekwa igwe ojii anyị kwesịrị ileta drive.google.com ma pịa My unit.
Ọ bụrụ na anyị echeburu ụdị ọdịnaya ụfọdụ, a ga-egosipụta ya na folda a. Ma ọ bụghị ya, ọ nweghị faịlụ ga-egosipụta. Na kọlụm aka ekpe, anyị nwere ike ịhụ abụọ ohere anyị nwere, dị ka nke anyị ka nwere n'efu.
Jiri Google Drive na kọmputa gị
Iji malite ibudata akwụkwọ na igwe ojii anyị, anyị nwere ọtụtụ ụzọ. Nke mbu bu site na ngwa nke Google nyere anyi maka komputa. Mgbe ị na-etinye ngwa a, ọ ga-ajụ anyị akwụkwọ ndekọ aha anyị chọrọ ịmekọrịta na igwe ojii. Nhọrọ nke abụọ bụ site na ịdọrọ folda ma ọ bụ akwụkwọ anyị chọrọ iji chekwaa ozugbo na ihe nchọgharị ahụ na mepee taabụ Google Drive.
Jiri Google Drive site na ekwentị gị
Ọ bụrụ na anyị chọrọ bulite faịlụ na ọrụ nchekwa Google anyị Site na ama anyị, anyị ga-ebu ụzọ tinye ngwa ahụ. Na-esote, anyị ga-ahọrọ faịlụ / s, onyonyo / s ma ọ bụ vidiyo / s nke anyị chọrọ bulite wee pịa nhọrọ Ekekọrịta, na-ahọrọ Google Drive yana folda nke anyị chọrọ ịchekwa ya.
Njirimara Google Drive
Ka afọ gafere, ọnụọgụ ọrụ nke Google na-etinye n'ime Google Drive a abawanyela, ruo mgbe anyị na-enye ugbu a ọnụ ọgụgụ buru ibu n'ime ha na nke anyị nwere ike ịkọwapụta:
Ihe okike ederede.
Okike nke akwukwo akwukwo.
Okike nke iji mezuo nyocha.
Chepụta eserese na flowcharts ịgbakwunye mgbe e mesịrị na mbụ kere akwụkwọ
Ihe nyocha ederede.
Mwekota na Foto Google.
Echekwa ụdị faịlụ ọ bụla, n'agbanyeghị usoro.
Nnyocha Smart, dịka ọ nwere ike ịmata ihe dị na onyonyo na ederede.
Alo nke gara aga nsụgharị nke otu akwụkwọ.
Google Drive na-enyekwa anyị ohere ịkekọrịta faịlụ na ndị ọzọ, faịlụ nke anyị nwere ike ịtọ ikikere dị iche iche sitere na ịgụ na idezi.
Etu esi ebudata Google Drive
Dịka m tụlere n’elu, Google Drive dị maka nyiwe igwe na desktọọpụ niile, agbanyeghị ọrụ ndị a na-enye site na ngwa mkpanaaka na desktọọpụ dị iche. Ọ bụ ezie na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka na-enye anyị ohere ịnweta ma dezie, dabere na ikpe ahụ, akwụkwọ anyị, ụdị desktọọpụ bụ nke anyị chọrọ mgbe niile iji mekọrịta faịlụ ndị anyị chọrọ ịnwe mgbe niile.
La Ngwa ngwa desktọọpụ Google Drive a na-eji ya maka ya mmekọrịta faịlụ, ebe ọ bụ na ịnweta ọdịnaya echekwara, anyị nwere ike ime ya site na weebụ, ma ọ bụ ozugbo site na ịnweta akwụkwọ ndekọ aha ebe anyị debere faịlụ ndị a na-emekọrịta oge ọ bụla edeziri ha.
Ego ole ka Google Drive na-efu
Onye ọrụ Gmail niile 15 GB bụ kpam kpam n'efu nke ohere iji dị ka ị chọrọ, a ohere na-akọrọ na Google Photos na na subtracted ma ọ bụrụ na anyị bulite niile ihe oyiyi na vidiyo na anyị na-eme na anyị ama na mbụ mkpebi. Foto Google na-enye anyị nhọrọ iji chekwaa foto na vidiyo anyị niile n'efu na-ewepụghị ebe nchekwa ọ bụrụhaala na anyị nabatara na ọrụ ahụ na-akpakọba onyonyo na vidiyo na enweghị oke mma.
Ugbu a, Google Drive na-enye anyị, na mgbakwunye na 15 GB n'efu, atọ ọzọ nchekwa nhọrọ na dị iche iche ahịa na imeghari ka mkpa nile nke ma ndi oru nzuzo na ulo oru.
100 GB maka euro 1,99 kwa ọnwa.
1 TB (1000 GB) maka euro 9,99 kwa ọnwa
10 TB (10.000 GB) maka euro 99,99 kwa ọnwa
Nke a ahịa ha nwere ike ịgbanwe, yana oghere nchekwa, ya mere nhọrọ kachasị mma ịmara nke ahịa Google Drive ugbu a bụ ịga ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Kedu ihe bụ Google Drive